Gbọala | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ụgbọ ala
Karịa iji sachaa ndị poplar buds n'ụlọ? Karịa ịsacha àgwà nke poplar buds si n'ụgbọala ahụ?
Naanị nanị ihe karịrị oyi na ya nsogbu n'ụdị corrosive reagents ụzọ na ọkwọ ụgbọala na-enwe ike na-ekuru a rie ude nke enyemaka, dị ka ozugbo na mmiri e nwere onye ọzọ, ọ na-erughị oké nsogbu. Nke a bụ poplar, ...
Enwerela batrị, otu esi amalite ụgbọ ala? Otu esi amalite ụgbọ ala gị, ma ọ bụrụ na batrị ahụ nọdụ ala
Ọnọdụ mgbe batrị na-agakwaghị adị maara onye nwe ụgbọ ala ọ maara. Dị ka a na-achị, nke a na-eme n'oge kachasị njọ ma na-eyi egwu nsogbu siri ike. Ọ bụrụ na obodo ndị mepere emepe, ikuku nke batrị ahụ na-eyi egwu ịbịbịa ...
Pickups "Chevrolet": nhazi
Ihe ọ bụla ọ bụ, ụgbọala ndị na-eburu ihe na-ewu ewu na United States. Ọzọkwa, America bụ ala nna ha. Akụkọ banyere ụgbọ ala ahụ malitere site n'echiche nzuzo. Ndị mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ "Chevrolet"
Lgbọ oloko "Lada Kalina" na okpu: nkọwa dị iche iche. "Lada Kalina 2" - ụgbọ ala ọgbọ ọhụrụ
Na 2013, AvtoVAZ masịrị ndị ọkwọ ụgbọala nwere akara ohuru, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa niile nke ọrụ aka. "Lada Kalina 2" bụ ụgbọ ala na-anya ụgbọ ala nke nwere oke ala na nnukwu ime ụlọ ọfụma.
Kedu ụgbọ ala ịzụrụ maka 200000? Ịzụta ụgbọ ala na Russia: ahịa, ndụmọdụ ọkachamara, nyocha
Ya mere, ụgbọ ala ole ka ị zụrụ maka 200000? N'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ na-ezighị ezi. Dị ka ha na-ekwu - maka ọ bụla uto na agba. German, Japanese, Russian, American - ihe ọ bụla ...
Mgbanwe nke oku VAZ-2114 na-ekpo ọkụ ọkụ na aka aka gị
Mgba ọkụ ọkụ na VAZ-2114 ụgbọala bụ otu akụkụ kachasị ike nke usoro ntụrụndụ. Ọ na-agbaji na ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala, inweta ahụmahụ, na-enweghị nsogbu ọ bụla, na-agbanwe onwe ya na ...
Mkpụrụ moto diesel ụlọ. Mkpụrụ moto Diesel na aka aka gị
E mepụtara atụmatụ nke ọgba tum tum na mmanụ dizel fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ. Otú ọ dị, ngwaọrụ ndị a abanyela n'ụzọ dị iche iche nke evolushọn. Ndi mmadu ole na ole nwere ike iche na mgbe ndia a ga-aru oru ...
Kedu ihe na-eme njem (ụgbọ ala)? SUVs na crossovers
Vehiclesgbọ ndị na-apụ apụ na crossovers bụ ụgbọ ala nwere nnukwu ikike. Ma n’obodo ma n’obodo dị iche iche, ha bụ ezigbo ndị enyi gị. Gịnị bụ ngagharị (ụgbọ ala) Crossovers - nke a bụ ihe ọhụrụ…
Ihe nkedo nkedo JCB 3CX Super: nkọwa, akwụkwọ ntuziaka onye nwe ụlọ
A maara ụlọ ọrụ Britain nke ụlọ ọrụ JCB n'ụwa nile maka katapila ya na ihe owuwu ihe owuwu dị elu. Ebe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị na-arụ ọrụ ntanghachi. Otu n'ime ụdị ndị a ma ama nke ngwá ọrụ dị otú ahụ ...
"Lada 2170" ("Priora"): nkọwapụta, nyocha
“Lada Priora-2170” - ụgbọ ala, nke mbụ nkeVVVZZ nke emepụtara na 2007 na sedan. Mgbe emesiri, na 2008, hatchback abanye na mmeputa oke, yana na 2009, ugba agha. Okwesiri ka amata na ...
KAMAZ-65115: nkọwa nhazi, nkọwa, foto
KAMAZ-65115, nke a ga-eme ka a mara ihu ọma ya n'okpuru ebe a, sitere na afọ 1995. Ụgbọala ahụ na-ere ahịa na 1998. Ọ bụ ụgbọelu nkedo, nchịkọta na ibudata nke na-eme n'azụ.
Ntak emi ẹkedọhọde ke ukpepn̄kpọ vinyl? Kedu esi kpoo ihe nkiri ahụ n'ụgbọala. Kedu ụlọ ọrụ ịzụrụ ihe nkiri vinyl?
Ka ọ dị ugbu a, a na-arụpụta ụdị ugbo ala n'ọtụtụ ụzọ. Otú ọ dị, ihe kachasị ewu ewu bụ ịzụfe ụgbọ ala na fim vinyl. Ihe a na-emepụta site na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe. Ihe nkwekọrịta dị oke mma na ịhọrọ onye ziri ezi ...
Onye na-egbochi ihe ntanye 250: nyocha, nkọwa nchịkwa, foto, oke ọsọ
Igwe moto Patron Taker 250 nwere ọdịdị aghụghọ. Nyocha a na-ahụ anya na-enye echiche na nke a bụ ihe mgbe ochie ụdị ụfọdụ nke "Japanese". Mana ndị ọkachamara na ndị ọgba tum tum nwere obi ụtọ ga-ekwu ozugbo ...
Ọ dị m mkpa ihichaa engine mgbe eji dochie mmanụ?
Ọ dị m mkpa ihichaa engine mgbe ị na-agbanwe mmanụ? N'ọtụtụ forums, ọ ga-ekwe omume ịchọta mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ banyere nke a. Ndị na-akwado echiche abụọ ahụ nwere nkwenye na ikike ha ruru otu narị percent, na-eduga ụdị ọ bụla nke ...
Lada Granta sedan: nkọwapụta na nyocha onye nwe ya
"Lada Granta" (Sedan) bụ aha ụgbọ ala ụgbọala na-aga n'ihu na Volga Automobile Plant. A na-ewere ihe nlereanya Lada Kalina dị ka ntọala. Na 2011, mmepụta nhazi malitere, na ...
Mmanụ engine: ndụ ndụ, nhọrọ, nchekwa
Onye ọ bụla ọkwọ ụgbọala, ma karịsịa onye mbido, nwere mmasị na ajụjụ nke otu esi họrọ mmanụ engine, oge ngwụcha, ngwugwu na ihe ngosi ndị ọzọ maka ụgbọ ala gị. A na ekwu na na njedebe nke ndụ ya, mmanụ, yana ...
Kedu ihe kpatara ịkụ aka mgbe ị na-atụgharị ụgbọ ụkwụ ahụ n'aka nri, aka ekpe?
N'elu nke mbụ nke ịnwe ụgbọ ala, onye nwe ya lekwasịrị anya na ọnọdụ okporo ụzọ. N'ime oge, abịa ghọta ihe ụfọdụ nke ụgbọ ala ya. Enwere ike ịchọpụta onwe gị nke ntiwapụ ụgbọ ala (pụtara ...
Iberibe ngwongwo ụgbọala na-amalite ibido
N'ọgbọ nke ụgbọala na ihe niile metụtara ha, e nwere ihe abụọ dị otú ahụ dị ka ibu dị arọ na ịkwụsị ịdị arọ nke ụgbọ ala ahụ. Ihe ndị a bụ àgwà abụọ a na-ekwukarị banyere usoro ọmụmụ ihe.
Igodo windo VAZ-2110 anaghị arụ ọrụ
Ọ bụrụ na windo akwụsịla ịrụ ọrụ na ụgbọ ala ahụ, mgbe ahụ ịnya ụgbọ ala ahụ nwere ike ịghọ ụra. Window mepere emepe na oyi oyi ma ọ bụ mechie n'ime okpomọkụ okpomọkụ bụ n'ụzọ doro anya ...
Chevrolet Niva, ite ụlọ: nnọchi. Chevrolet Niva nke GM-AvtoVAZ rụpụtara
Igwe Niva Chevrolet bụ otu n'ime ụdị mmepụta iziputa nkeVVAZ bụ nke etinyere ụlọ ọkụ ahụ n'ụlọ ọrụ. Ihe mmewere a na-arụ ọrụ dị mkpa. Banyere ngwaọrụ ya, ụdị ya na nnọchi ya - ọzọ ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,412.